सर्कियो, बाँचेर फर्कियो
जन्म, जीवन, जवानी जिजीविषामा कस्ता-कस्ता उकाली, कुइनेटा र गौँडा काट्नुपर्छ, कसले भन्न सक्छ र ? जिन्दगी जस्तो सूत्रमा सोच्यो, जस्तो देख्यो त्यस्तो कहाँ हुन्छ र ! त्यसैले त जिन्दगी सूत्रात्मक परिभाषाभन्दा धेरै पर हुन्छ भन्छन् ।
झन् नेपाली निम्न मध्यमवर्गीय जीवन कल्पनाभन्दा धेरै पर हुन्छ । न गरिब हुन सक्ने, न त धनी जीवन नै बाँच्न पाउने । घडीको पेन्डुलम झैँ हुन्छ तिनको जिन्दगी । जीवन भोगाइपछि मात्र भन्न सकिने अर्बौं मानिसमध्ये यो एकको अनुभव हो । अनुभव शिक्षा मात्र होइन, सत्य पनि हो ।
२०५४ साल वैशाखको कुनै दिन रेडियो नेपालमा एक जना मलाई खोज्दै आइपुग्यो । ऊ जनज्योति माविमा सँगै पढ्दा सधैँ प्रथम भइरहने साथी विनोद आचार्य थियो । भेट नभएको पनि १३ वर्ष बितिसकेको थियो । तर, उसका बारेमा एउटा कुराचाहिँ थाहा थियो- उसले मेरी मितिनी दिदी एवं सहपाठी रुपा शाक्यसँग भागी बिहे गरेको थियो । थप अरु केही थाहा थिएन । ऊकहाँ र के गर्दै छ ? फुर्के मान्छे । साथी खोजेरै भेट्न आएपछि दंग थिएँ म ।
एकातिर पढाइमा अब्बल ठानिएको विनोद अर्कोतिर म निम्छरो विद्यार्थी । तुलना गर्नु नै मूर्खता हुन्थ्यो । परम्परागत औ शास्त्रीय आँखाले हेर्दा । अनुभवले साबित गरिसक्यो । शिक्षामा अब्बल हुनु परीक्षामा धेरै अङ्क प्राप्त गर्नु मात्रै होइन । तिनताक सिंहदरबारको मूल द्वारनजिक शाही नेपाली सेनाले चलाएको चमेना गृह थियो । चिया खाजाका लागि सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूको घुइँचो लाग्थ्यो । बाहिरबाट पनि मानिसहरू आउँथे । हामी खाजा खान त्यहीँ गयौँ ।
तिनताक राष्ट्रिय योजना आयोगमा काका डा. देवेन्द्र चापागाईं सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले शिक्षाक्षेत्र पनि हेर्नुहुन्थ्यो । बाठो विनोदले भनेपछि मात्र थाहा पाएको थिएँ । उसले आफ्नो बेलीबिस्तार लगायो । केही दशकदेखि आनी हुनुभएकी जेठी मितीनी दिदी राज्यप्रभा शाक्यको संयोजनमा कान्छी मितिनी दिदी रूपा शाक्यको भागी विवाह सम्भव भएको उसले सुनाएको थियो । यो कुरा दिदी राज्यप्रभा शाक्यले पनि भन्नुभएको थियो ।
विनोद आचार्यले वन विज्ञानमा स्नातक सकाएको थियो । रूपा दिदीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट ओभरसियरको पढाइ सक्नुभएको थियो । दुवै जना जिल्ला वन संरक्षण कार्यालय लमजुङको बेँसीशहरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । खाजा खाँदै गर्दा दुई वटा भान्जा जन्मिवरी हुर्कने क्रममा रहेको साथी विनोदले एकै सासमा बताएको थियो ।
लेखिरहँदा सम्झेँ- उनीहरू परिवारसहित न्युजिल्याण्डतिर बसोबास गर्न थालेको पनि दशक नाघिसक्यो । चमेना चपाउॅंदै साथी आचार्यले भन्यो, ’तेरो काका आयोगमा हुनुहुॅंदो रहेछ । मलाई छात्रवृत्तिका लागि कुरा गर्दे ।’ मिल्ने साथी । नाई नास्ती गर्ने कुरै भएन । भोलिपल्ट भेट्न जाने सल्लाह भएर छुट्टियौँ । साथी विनोद उसको ससुराली म्हेपीतिर लागेपछि म तहाचल हिँडे । तिनताक काठमाडौं खाल्डोका मानिसहरू छोटो दूरीका लागि साधन चढ्नभन्दा हिँड्न बल गर्थे । म पनि त्यसै गर्थें ।
तिनताक नियमित मदिरा सेवनको लतजस्तै थियो । केही प्याला घुटक्यायो, भुसुक्क निदायो । रेडियो नेपालको रिपोर्टर भए पनि त्यो दिन स्थलगत रिपोर्टिङमा कहीँ जानु पर्ने थिएन । सिंहदरबारभित्रको रेडियो नेपाल परिसरमा विनोद आचार्य फेरि झुल्कियो । चिया पिउन अघिल्लो दिन खाजा खान गएको चमेना गृहमा पुग्यौँ । पढाइकै कारण विनोदको अगाडि कताकता लघुताभाष हुन्थ्यो ।
कुरा उसैले सुरु गर्‍यो, 'तॅं अल्छी मात्र रै'छस् । तर, तॅंसँग प्राज्ञिक क्षमता राम्रो छ ।’ भूमिका बॉंध्दै रै'छ । बल्ल मेसो पाएँ । उसैले कुरा थप्यो, 'तैँले हिमाल द्वैमासिकमा लेखेका आलेखहरू पढेको थिएँ । राम्रो र स्तरीय लागेको थियो । जाँगर लगाइस् भने तॅं एउटा बौद्धिक मान्छे हुन सक्छस् ।’
उसको कुरा सुनेँ तर कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ । किनभने उसले पढिसकेको काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरण र प्रौढ शिक्षाको आलेख लेख्न कति मिहिनेत र खोज गर्नुपरेको थियो । त्यो मलाई भलीभाँती याद थियो ।
चियापानपछि हामी सिंहदरबारमै रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा सदस्य डा. देवेन्द्र चापागाईंलाई भेट्न गयौँ । उहाँले अमेरिकाबाट कृषिजन्य अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो । उहाँ एसएलसीमा बोर्ड टप टेनको सूचीमा पर्न सफल उम्दा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । फुलब्राइट स्कलरको रूपमा प्राज्ञहरू बीचमा राम्रो पहिचान थियो ।
चौथो तलामा रहेको डा. चापागाईंको कार्यकक्षमा हामी पुग्यौँ । साथी विनोदले आफ्नो कुरा बेलीबिस्तार लगायो । लमजुङको बेँसीशहर बसेर पनि उसले तालिम र छोटो कार्यशालाका लागि अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य, चीन र भारत पुगिसकेको बताएको थियो । डा. चापागाईंलाई अस्ट्रेलियाको असएड छात्रवृत्ति मिलाइदिन अनुरोध गर्‍यो । विनोदले चाँजोपाँजो मिलाइदिन अनुरोध गरेको छात्रवृत्ति तिनताक नेपालको सरकारी कर्मचारीलाई मात्र दिने गरिन्थ्यो ।
त्यसरी कर्मचारीलाई दिइने छात्रवृत्तिको संख्या प्रतिवर्ष १० थियो । जसमा पाँच महिला कर्मचारी र ५ पुरुष कर्मचारीले पाउँथे । तर, त्यो छात्रवृत्ति पाउन केही सीमाहरू तय गरिएका थिए । सरकारी कर्मचारी हुनुपर्ने, पढ्न चाहेको विषयमा कम्तीमा दोस्राे श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र आईएलटीएस एकेडेमिक (इन्टरनेसनल इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम) मा सबैमा ६ दशमलव ५ ल्याउनैपर्नेजस्ता प्रावधान थिए ।
तिनताक रेडियो नेपालमा काम गर्नु, बाहिर विभिन्न पत्रपत्रिकामा काम गर्नु र अन्य व्यावसायिक नेपालीझैँ थोरबहुत दलगत राजनीति गर्नुजस्ता दैनिकीमा अल्झिएको थियो जीवन । विदेश जाने, पढ्ने र त्यसैअनुसार वृत्तिविकास गर्ने सोच न मेरो दिमागमा कहिल्यै आएको थियो, न त त्यस्तो कल्पनै कहिल्यै गर्थें ।
भेटेजति पत्रपत्रिका पढनु, हप्तामा एक या दुई पटक मार्टिन चौतारीको छलफल र कार्यशालामा सहभागी हुनु र अलिअलि किताब पढ्नुजस्ता अतिरिक्त गतिविधिमै रुमल्लिइरहेको थिएँ । २०५४ सालको वरिपरि एउटा नवविवाहित युवकको समय नदीझैँ एकतमासले बगिरहेको थियो । न ठूलो उतार, न त ठूलो चढाव ।
रेडियो नेपालको समाचार बुलेटिनका लागि समाचार लेख्नु, घटना र विचार र खोजखबरजस्ता रेडियो म्यागजिनका लागि रिपोर्टिङ गर्नु नै दैनिकी थियो । एक दिन विनोदले लमजुङकाे बेँसीशहरबाट फोन गर्‍यो ।
उसले भन्यो, ‘लमजुङ र गोर्खाको साँधमा रहेको चेपे नदीनजिक पर्ने रानी स्वाँरामा पहिरोले झण्डै ८० घरपरिवार विस्थापित भए । जिल्ला सदरमुकामबाट स्थलगत भ्रमणमा टोली जाँदै छ । त्यसको संयोजन वन तथा भू-संरक्षण कार्यालय लमजुङले गर्दै छ । तँ रेडियो नेपालका लागि रिपोर्टिङ गर्न आइज । तेरो कार्यालयमा के-के मिलाउनुपर्ने हो मिला ।’
त्यसपछि उसले थप्यो, 'श्रीमतीलाई पनि लिएर आइज । बुढाबूढीसँगै घुम्न हुन्छ ।’ हिँड्न, डुल्न र यात्रामा आनन्द लिन अभ्यस्त भइसकेको मैले ‘नाइँ’ भन्ने कुरै भएन । टेलिफोन वार्ता सकिएको भोलिपल्ट रेडियो नेपालमा स्थलगत रिपेर्टिङका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेँ ।
काठमाडौं-बेँसीशहर जाने बस चढियो । श्रीमतीसँग (शारदा सापकोटा) बस चढेर लाग्यौँ हामी बेँसीशहर । तिनताक पाउँदीसम्म मात्र सडक पिच भएको थियो । पाउँदी खोलाभन्दा उता पिच पनि भएको थिएन र त्यो खोलामा पुल पनि बनेको थिएन । पुरानो हृदयविदारक समाचार सम्झेँ । २०५४ सालअघि नै पाउँदी खोलामा बस पल्टेर थुप्रै मानिस मृत्यु भएको थियो ।
हामी पाउँदी तरेर हिँडेरै परसम्म गयौँ र त्यहाँ फेरि अर्को बस चढ्यौँ । मुख्य सडकको आडमै रहेछ वन तथा भू-संरक्षण जिल्ला कार्यालय । त्यसकै माथ्लापट्टि प्रिय रूपा शाक्य दिदी र साथी विनोद आचार्य बस्ने कोठाहरू रहेछ । रुवी र विरु भान्जा ८ र ४ वर्षका थिए होलान् । दिदी रूपासँग १३ वर्षपछि भेट भएको थियो । त्यसमाथि हुर्कंदै गरेका दुई सुन्दर भान्जा थिए । म श्रीमतीसहित गएको हुनाले पारिवारिक भेट र पुरानो मित्रमिलनजस्तो माहौल बनेको थियो । हामी सबै जना पारिवारिक मिलनले दंगदास थियौँ । समय, आम्दानी, उपलब्धता र आवश्यकताअनुरूपकै थिए चिट्टिक्क परेका तीनवटा कोठा ।
अत्यन्त रमाइलो माहौलमा कुराकानी भएको थियो विनोद र रुपा दिदी अनि भान्जाहरूसँग । उतिबेला बाँसको चोयाबाट बनेको पुस्तक, सरसामान र जुत्ताचप्पल राख्ने सानो र्‍याकको प्रयोग गर्ने चलन जताततै थियो । लगभग यो चलन फेसनकै रूपमा देशैभरि चलेको थियो । त्यहाँ भान्छा छेउमा एउटा मझौला आकारको र्‍याकमा भरिभराउसँग पत्राचार भएका साना-ठूला खामहरू देखें । जिज्ञासु मान्छे त्यसमाथि पत्रकार । के हो भन्ने खुलदुली लाग्यो । ‘र्‍याकभरिको फण्डा के हो यस्तो ?’, मेरो जिज्ञासा छचल्कियो ।
अब जिल्ल पर्ने पालो हामी बुढाबूढीको थियो । त्यतिबेला विनोद आचार्यले बेलीबिस्तार लगाएको वर्णन यस्तो थियो, ‘लमजुङ बसेर चीन, अस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य र अन्य देशका अनेकौँ विश्वविद्यालय र तालिम दिने संस्थाहरूलाई निवेदन पठाउँथेँ । कुनैकुनै महिना मेरो तलबभन्दा बढी पैसा त अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक दस्तुर तिर्दै सकिन्थ्यो ।
अनवरत चिट्ठीपत्र आदानप्रदान गर्ने एक किसिमको नसा लागेको थियो । त्यसले लमजुङको बेँसीशहर बसेर पनि लामो छोटो तालिम र कार्यशालामा चीन, भारत, यूके र अस्ट्रेलिया पुगेर सहभागी भइसकेको थिएँ । त्यो क्रम अब कि संयुक्त राष्ट्र संघको जागिर कि नामी विश्वविद्यालयको लामो पढाइका लागि जारी राखेको थिएँ । एक दिन त कसो नमिल्ला ?’
विनोद आचार्यको कुरा सुनेर हामी दुवै ट्वाँ परेका थियौँ । हुन पनि तिनताक न फेस बुक, ट्विटर, ह्वाट्स एपजस्ता सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल, न त जीमेल वा याहूमेलको प्रयोग थियो । इन्टरनेटको अहिलेको क्रान्ति गर्भमै थियो । महँगो हुलाक सेवा महसुल तिरेर मात्र पत्राचार गर्न सकिने समय थियो । हामीलाई उसले लमजुङ बसेर गरेको सघन प्रयासबारे सुनाएको केही वर्षपछि विनोदले संयुक्त राष्ट्र संघको जागिर लामै समय खाएको थियो । सपरिवार स्थायी रूपमा न्युजिल्याण्डमा बसोबास गर्न थालेको विनोद त्यसअघि स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र लिएर धेरै वर्ष यूके पनि बसेको थियो । ला विगतको कुरा लेख्न लागेको अन्तैतिर पो बरालिएछ ।
हामीले दुई दिन दुई रात मर्स्याङ्दी नदीको तिरमा रहेको लमजुङको सदरमुकाम बेँसीशहरमा घुमघाम गरेर बिताएका थियौँ । त्यस क्रममा अहिलेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लमजुङ जिल्ला विकास समितिका सभापति जमिन्द्रमान घले र उपसभापति स्थिरबाबु घिमिरेसँग पनि भेटघाट गरेका थियौँ ।
समय र कथाले बेँसीशहरबाट हामी पहिरो गएको क्षेत्र रानी स्वाँरा जानैपर्ने भयो । तत्कालीन जिल्ला प्रशासन प्रमुख, नाम बिर्सें तर थर भट्टराई, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विजय गुरुङ, विनोद र पङ्क्तिकारलगायतको ठूलै टोली रानी स्वाँराका लागि हिँड्यो ।
सीडीओ भट्टराई पाको, अनुभवी, फरासिलो र रमाइलो मानिस हुनुहुन्थ्यो । तालतालका चुट्किला, रमाइलो प्रसंग र प्रस्तुतिले हाम्रो यात्रा रमाइलो भएको थियो । पाको मान्छे । देश खाएर शेष भएको त्यसै भनिएको होइन भन्ने टोलीका सदस्य सबैले महसुस गरेका थिए । ठाडोठाडो उकालो पनि प्रजिअको रमाइलो कुराकानीले गर्दा सहजै काटेथ्यौँ ।
साँझ एक ठाउँमा बास बसेर भोलिपल्ट मात्र हामी गन्तव्यस्थल पुग्ने अवस्था थियो । बेलुका सबैले झिल्के पानी पियौँ । त्यसपछि खाना खाँदै थियौँ । सीडीओसा'प कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रत्येक कुरामा हँसाउने गजबको खुबी थियो उनमा । मैले मुखमा गाँस हालेको मात्र थिएँ । के प्रसंगमा हो कुन्नि, सबैलाई हाँस्नैपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
म हाँस्दा भात सर्कियो । हिरिक हिरिक गर्दागर्दै मनले ठान्यो- यो संसारमा मेरो जीवन यति नै थियो । मर्छु जस्तो लाग्यो । शरीरले लगभग मर्ने तयारी गर्दै थियो । अब केही मिनेटमै मेरो मानव शरीर मृत्युको चिर निन्द्रामा सुत्नेछ भन्ने सोचमा पुगी सकेको थिएँ । अकस्मात् कसैले मेरो घाँटीको ठ्याक्कै पछाडि घुच्चुकमा कस्सेर हात धारे पारेर हिर्काएजस्तो लाग्यो । त्यसपछि मेरो श्वासनलीमा अड्किएको भातको सिता बाहिर निस्क्यो । बिस्तारैबिस्तारै हिरिकहिरिक गर्दै म सामान्य अवस्थामा आएको थिएँ ।
आपत्कालीन अवस्थालाई झेल्न र त्यसैअनुसार चल्न जान्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख विजय गुरुङ हुनुहुँदो रहेछ मेरो घुच्चुकमा धारे हातले हान्ने । उहाँले खाने कुरा सर्किएर नेपाल प्रहरीको पूर्वमहानिरीक्षकको मृत्यु भएको सत्य घटना सबैलाई सुनाउनुभएको थियो । त्यसपछि हाम्रो बसाइको माहौल एकदमै गम्भीर भयो । मैले पिएको झिल्के पानीले पनि छोडेजस्तो भयो । येनकेन निन्द्रादेवीको शरणमा परेँ ।
भोलिपल्ट हामी पहिरोले क्षतिग्रस्त रानी स्वाँराको स्थलगत भ्रमण गरेर बेँसीशहरतिर फर्क्यौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नीलो रंगको महिन्द्रा जीपमा पाउँदी नदीसम्म बुढाबूढी फर्क्यौं । त्यसपछि त्यहाँबाट पोखरातिर लाग्यौँ । दुई दिन पोखरा घुमेर आँबुखैरेनीसम्म आएर बास बस्यौँ ।
भोलिपल्ट आँबुखैरेनीबाट बुढाबूढी मनकामनाको दर्शन गर्न उक्ल्यौँ । मनकामनाबाट ओरालो झरेर काठमाडौंको बस चढयौँ । धन्न काठमाडौं आइपुगियो । धन्न २८ वर्षको उमेरमै झण्डै यो संसार छाडिएको थियो । कसरीभन्दा भात सर्किएर । बाँचे संसार देखिन्छ, बाँचिरहिएकै छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७, ११:३८:००